ISofamet > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Sofamet yezidakamizwa: imiyalelo yokusetshenziswa
Izibhebhe ezimhlophe, i-oblong, i-biconvex, ene-notch kuzinhlangothi zombili, ekuphukeni kombala omhlophe.
Ababizi: i-povidone K25, i-microcrystalline cellulose, i-sorbitol, i-magnesium stearate.
Ukwakheka kwengubo yefilimu: I-Opadry II emhlophe (hypromellose 2910, titanium dioxide, lactose monohydrate, macrogol 3000, triacetin)
Umenzeli we-oral hypoglycemic agent eqenjini le-Biguanides (dimethylbiguanide). Ukusebenza kwesinyathelo se-metformin kuhlotshaniswa namandla ayo okucindezela i-gluconeogenesis, kanye nokwakhiwa kwamahhala wamafutha acid kanye ne-oxidation yamafutha. Kwandisa ukuzwela kwama-receptors aphathelene ne-insulin nokusetshenziswa kweglucose ngamaseli. I-Metformin ayithinti inani le-insulin egazini, kodwa ishintsha ama-pharmacodynamics wayo ngokunciphisa isilinganiso se-insulin eboshiwe ukuze ikhulule futhi yandise isilinganiso se-insulin kuma-proinsulin.
I-Metformin ivuselela ukwakheka kwe-glycogen ngokwenza izinto nge-glycogen synthetase. Kwenyusa umthamo wokuhamba wazo zonke izinhlobo zabathutha be-membrane glucose. Ibambezela ukumuncwa kwamathumbu ushukela.
Yehlisa izinga le-triglycerides, LDL, VLDL. I-Metformin ithuthukisa izakhiwo zegazi ze-fibrinolytic ngokucindezela isicubu se-plasminogen activator inhibitor.
Ngenkathi uthatha i-metformin, isisindo somzimba wesiguli sihlala sizinzile noma sincipha ngokulinganisela.
Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, i-metformin ingena kancane futhi ingapheleli emzimbeni wamgudu wokugaya ukudla. I-C max kwi-plasma ifinyelelwa ngemuva kwamahora angaba ngu-2,5. Ngomthamo owodwa ka-500 mg, i-bioavailability ephelele ingu-50-60%. Ngokufakwa kanyekanye, ukumuncwa kwe-metformin kuyancishiswa futhi kubambezeleke.
I-Metformin isatshalaliswa ngokushesha kwizicubu zomzimba. Akubophele amaprotheni e-plasma. Iqongelela emithanjeni yamathe, isibindi nezinso.
Kuthuliswa izinso zingashintshiwe. I-T 1/2 kusuka ku-plasma ngamahora angama-2-6.
Uma kwenzeka umsebenzi we-renal ophazamisekile, ukubalwa kwe-metformin kungenzeka.
Thayipha isifo sikashukela esingu-2 mellitus (esingethembekile kwe-insulin) ngokwelashwa kokudla kanye nokuzivocavoca kokusebenza ngokungasebenzi, ezigulini ezinenkinga yokukhuluphala: kubantu abadala - njenge-monotherapy noma ngokuhlangana namanye ama-hypoglycemic agents noma nge-insulin, ezinganeni ezineminyaka eyi-10 nangaphezulu - njenge-monotherapy noma kuhlangene ne-insulin.
Ikhodi ye-ICD-10 Inkomba
E11 Thayipha isifo sikashukela sesi-2
Iphuzwa ngomlomo, ngesikhathi sokudla noma ngemuva kokudla.
Umthamo kanye nemvamisa yokuphatha kuncike kwifomu lomthamo elisetshenzisiwe.
Nge-monotherapy, umthamo wokuqala wokuqala wabantu abadala ungama-500 mg, ngokuya ngefomu lomthamo elisetshenzisiwe, imvamisa yezokuphatha izikhathi eziyi-1-3 / ngosuku. Kungenzeka ukusebenzisa i-850 mg izikhathi ezi-1-2 / ngosuku. Uma kunesidingo, umthamo wanda kancane kancane ngokuphumula kwesonto eli-1. kufika ku-2-3 g / ngosuku.
Nge-monotherapy yezingane ezineminyaka eyi-10 nangaphezulu, umthamo wokuqala ngu-500 mg noma we-850 1 isikhathi / usuku noma 500 mg izikhathi ezi-2 / ngosuku. Uma kunesidingo, ngokuphumula okungenani kwesonto eli-1, umthamo ungakhushulwa ufike ku-2 g / ngosuku kumthamo we-2-3.
Ngemuva kwezinsuku eziyi-10-15, umthamo kumele uguqulwe ngokususelwa emiphumeleni yokunqunywa kwe-glucose egazini.
Ngokuhlanganiswa kokwelashwa ne-insulin, umthamo wokuqala we-metformin ngu-500-850 mg izikhathi ezi-2 / ngosuku. Umthamo we-insulin ukhethiwe ngokusekelwe emiphumeleni yokunqunywa kweglucose egazini.
Ukusuka ohlelweni lokugaya ukudla: kungenzeka (ngokuvamile ekuqaleni kokwelashwa) isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo, ukuthokomala, umuzwa wokungakhululeki esiswini, ezimweni ezingazodwa - ukwephulwa komsebenzi wesibindi, i-hepatitis (inyamalala ngemuva kokulashwa imile).
Kusukela ohlangothini lwe-metabolism: akuvamile kakhulu - i-lactic acidosis (ukuyeka ukwelashwa kuyadingeka).
Kusuka ohlelweni lwe-hemopoietic: akuvamile kakhulu - ukwephulwa kokufakwa kwe-vitamin B 12.
Iphrofayili yokuphendula okungahambi kahle ezinganeni ezineminyaka eyi-10 nangaphezulu ziyefana nakwabadala.
I-Hypersensitivity, i-hyperglycemic coma, i-ketoacidosis, ukwehluleka okungapheli kwe-renal, isifo sesibindi, ukuhluleka kwenhliziyo, ukufakwa kwe-myocardial acute, ukwehluleka ukuphefumula, ukuphelelwa amandla, ukudakwa, ukudakwa kwe-hypocaloric (ngaphansi kwe-1000 kcal / usuku), i-lactic acidosis (kufaka umlando), ukukhulelwa, inkathi yokuqunjelwa. Umuthi awunqunyelwe ezinsukwini ezi-2 ngaphambi kokuhlinzwa, i-radioisotope, izifundo ze-x-ray ngokwethulwa kwezidakamizwa ezihlukile eziqukethe iodine futhi zingakapheli izinsuku ezi-2 emva kokuba zenziwe.
Isetshenziswa kanjani: umthamo kanye nenkambo yokwelashwa
Ngaphakathi, phakathi noma ngokushesha emva kokudla, ezigulini ezingayitholi i-insulin, 1 g (amaphilisi ama-2) izikhathi ezi-2 ngosuku ngezinsuku zokuqala ezingama-3 noma ama-500 mg izikhathi ezi-3 ngosuku, bese kusuka ezinsukwini ezi-4 kuye kwezingu-14 - 1 g izikhathi ezintathu ngosuku, ngemuva kwezinsuku eziyi-15 umthamo ungancishiswa kucatshangelwa okuqukethwe ushukela egazini nomchamo. Umthamo wokulungisa nsuku zonke - 1-2 g.
Amaphilisi we-retard (850 mg) athathwa 1 ekuseni nakusihlwa. Umthamo omkhulu wansuku zonke ngu-3 g.
Ngokusebenzisa kanyekanye i-insulin ngomuthi ongaphansi kwama-40 amayunithi / ngosuku, isilinganiso semithamo ye-metformin siyefana, kanti umthamo we-insulin ungancishiswa kancane kancane (ngamayunithi ama-4-8 / ngosuku nsuku zonke). Kwi-insulin umthamo ongaphezu kwama-40 amayunithi / usuku, ukusetshenziswa kwe-metformin kanye nokwehla komthamo we-insulin kudinga ukunakekelwa okukhulu futhi kwenziwa esibhedlela.
Ama-analogues kanye namanani entengo yesidakamizwa i-Sofamet
amaphilisi athambile emafilimu
amaphilisi wokukhulula asekelwe
amaphilisi wokukhulula amiselwe ifilimu
Inani lamavoti: odokotela abangama-73.
Imininingwane yabaphendule ngokukhethekile:
Ngesikhathi sokukhulelwa, kungenzeka uma umphumela olindelekile wokwelashwa udlula ubungozi obungahle ubonakale enganeni (izifundo ezanele futhi ezilawulwa ngokuqinile ekusebenziseni ngesikhathi sokukhulelwa zingaqhutshwa).
Isigaba se-FDA sokusebenza kwengane ngu-B.
Ngesikhathi sokwelashwa kufanele uyeke ukuncelisa ibele.
Ukusuka ohlelweni lokugaya ukudla: isicanucanu, ukuhlanza, ukunambitheka “okusansimbi” emlonyeni, ukuncipha kokudla, i-dyspepsia, i-flatulence, ubuhlungu besisu.
Kusukela ohlangothini lwe-metabolism: kwezinye izikhathi - i-lactic acidosis (ubuthakathaka, i-myalgia, ukuphazamiseka kokuphefumula, ukozela, ubuhlungu besisu, i-hypothermia, ukwehla kwengcindezi yegazi, i-Reflex bradyarrhythmia), nokwelashwa kwesikhathi eside - i-hypovitaminosis B12 (malabsorption).
Kusuka kwizitho ze-hemopoietic: kwezinye izimo - i-megaloblastic anemia.
Ukuvela komzimba: ukuqhuma kwesikhumba.
Uma kwenzeka imiphumela emibi, umthamo kufanele wehliswe noma ukhanselwe okwesikhashana.
Ngesikhathi sokulashwa, ukuqapha umsebenzi wezinso kuyadingeka; ukuzimisela kwe-plasma lactate kufanele kwenziwe okungenani izikhathi ezi-2 ngonyaka, kanye nokubukeka kwe-myalgia. Ngokuthuthukiswa kwe-lactic acidosis, ukunqanyulwa kokwelashwa kuyadingeka.
Ukuqokwa uma kunengozi yokuphelelwa ngumzimba akunconywa.
Ukungenelela okukhulu nokulimala okukhulu, ukushiswa okukhulu, izifo ezithathelwanayo ezine-febrile syndrome kungadinga ukuqedwa kwemithi yomlomo ye-glypoglycemic kanye nokuphathwa kwe-insulin.
Ngokulashwa okuhlangene ne-sulfonylurea derivatives, ukuqapha ngokucophelela i-glucose okuhlushwa kuyadingeka.
Ukusetshenziswa okuhlangene ne-insulin kunconyelwa esibhedlela.
I-Ascorutin (Ascorutin) amaphilisi omlomo
I-Yogurt (Yogurt) Capsule
I-Ergoferon () lozenges
Magne B6 (Magne B6) amaphilisi omlomo
IPapaverine (Papaverine) amaphilisi omlomo
** Umhlahlandlela Wemithi wenzelwa imininingwane kuphela. Ngeminye imininingwane, sicela ubheke isichasiselo somkhiqizi. Ungazenzisi, ngaphambi kokuthi uqale usebenzise iSofamet, kufanele uthintane nodokotela. I-EUROLAB ayinasibopho semiphumela ebangelwa ukusetshenziswa kolwazi oluthunyelwe ku-portal. Noma yiluphi ulwazi olukule ndawo aluthathi isikhundla seluleko udokotela futhi alunakusebenza njengesiqinisekiso somphumela omuhle womuthi.
Unentshisekelo kuSofamet? Ngabe ufuna ukwazi imininingwane eminingi noma udinga ukubona udokotela? Noma udinga ukuhlolwa? Ungakwenza yenza isivumelwano sokubonisana nodokotela - Umtholampilo i-Euro ilebhu ngaso sonke isikhathi ekusebenzeni kwakho! Odokotela abahle kakhulu bazokuhlola, bakwelule, bahlinzeke ngosizo oludingekayo futhi bakulungiselele isifo. Ungase futhi shayela udokotela ekhaya. I-Clinic Euro ilebhu ngikuvulele ubusuku nemini.
** Ukunakwa! Imininingwane eyethulwa kule mhlahlandlela wezokwelapha ihloselwe ochwepheshe bezokwelapha futhi akufanele kube izizathu zokuzelapha. Ukuchazwa kweSofamet kungokwaziswa kuphela futhi akuhloselwe ukunquma ukwelashwa ngaphandle kokubamba iqhaza kukadokotela. Iziguli zidinga izeluleko zochwepheshe!
Uma usanentshisekelo kunoma yimiphi eminye imithi nemithi, izincazelo zayo nemiyalo esetshenzisiwe, imininingwane ekwakhiweni nasefomini lokukhululwa, izinkomba zokusebenzisa kanye nemiphumela emibi, izindlela zokusebenzisa, amanani kanye nokubuyekezwa kwemithi, noma ngabe unayo eminye imibuzo neziphakamiso - sibhalele, ngokuqinisekile sizozama ukukusiza.
Akuhambisani ne-ethanol (lactate acidosis).
Sebenzisa ngokuqapha ngokuhambisana nama-anticoagulants angaqondile kanye ne-cimetidine.
Ama-Derivatives we-sulfonylureas, i-insulin, i-acarbose, i-MAO inhibitors, i-oxytetracycline, i-ACE inhibitors, i-clofibrate, i-cyclophosphamide ne-salicylates zandisa umphumela.
Ngokusetshenziswa kanye kanye kwe-GCS, ama-hormone okuvimbela inzalo ukuphathwa komlomo, i-epinephrine, i-glucagon, ama-hormone e-thyroid, okuphuma kwe-phenothiazine, i-thiazide diuretics, i-nicotinic acid derivatives, ukwehla komphumela we-hypoglycemic we-metformin kungenzeka.
I-Nifedipine ikhulisa ukumuncwa, i-Cmax, yehlisa ukubekeka kokukhipha isidumbu.
Izidakamizwa zeCationic (amiloride, digoxin, morphine, procainamide, quinidine, i-quinine, i-ranitidine, i-triamteren ne-vancomycin) ezitholakala kuma-tubules zincintisana nezinhlelo zokuhambisa amashubhu futhi zingakhulisa i-Cmax ngama-60% ngokwelashwa okuhlala isikhathi eside.
Inhloso yokuthi umuthi uzoba ofanele uma isiguli sinesifo sikashukela sohlobo 2 (esingathembele kwe-insulin). Lokhu kusebenza ikakhulukazi uma, ngaphambi kokuchaza umuthi, ukwenziwa okujwayelekile kokudla kanye nokwethulwa komsebenzi womzimba kungalethi imiphumela efanele. Kunqunyelwe, kufaka phakathi iziguli ezinokukhuluphala.
Inhloso yokuthi umuthi uzoba ofanele uma isiguli sinesifo sikashukela sohlobo 2.
Ukwemukela kufanele kwenzeke ngesikhathi sokudla noma ngemuva kokudla. Umthamo wokuqala wabantu abadala ungama-500 mg izikhathi ezingama-1-3 ngosuku. Kuvunyelwe ukuthatha ama-850 mg izikhathi ezi-1-2 ngosuku.
Ngemuva kwezinsuku eziyi-10 zokuphatha, umthamo ungashintshwa udokotela ngokuya ngamanani eglucose wegazi.
Kwezinye izimo, udokotela uthatha isinqumo sokunquma ukwelashwa okuhlanganisa inhlanganisela ne-insulin.
Njengoba into esebenzayo ikwazi ukudlula kumgoqo we-placental, ukusetshenziswa kwayo ngesikhathi sokukhulelwa kungenzeka kuphela njengezinyathelo sokugcina. Isithako esisebenzayo singafaka nobisi lukamama. Lokhu kusho ukuthi ngesikhathi sokuzala, umuthi ungcono ukungabeki.
Njengoba into esebenzayo ikwazi ukudlula kumgoqo we-placental, ukusetshenziswa kwayo ngesikhathi sokukhulelwa kungenzeka kuphela njengezinyathelo sokugcina.
Ngokuthatha ngokweqile umuthi emzimbeni, ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis enomphumela obulalayo kungenzeka. Kuyadingeka ukususa umuthi emzimbeni usebenzisa i-hemodialysis.
Izimpawu ezibalulekile ze-hepatic yisona sizathu sokunqunyelwa kokunqunywa.
Ukuhlanganiswa komuthi notshwala kukhulisa ubungozi be-lactic acidosis.
Ungabuyisela isidakamizwa ngezidakamizwa ezifana neGlucofage, Metospanin, Siafor.
A.D. I-Shelestova, i-endocrinologist, i-Lipetsk: "Umuthi ukhombisa imiphumela emihle ekwelashweni kwesifo sikashukela sohlobo 2. Lokhu kungenxa yokuthi inqubo yokusebenza ihlose ukunciphisa inani le-glucose egazini. Ngakho-ke, umphumela ungatholakala emavikini ama-2 okwelashwa, afanele iziguli. Kubalulekile ukucabanga ukuthi ngemuva kokwelashwa, uzodinga ukuhola impilo enempilo futhi ulondoloze ukusebenza okugcwele komzimba. "
I-S.R. I-Reshetova, i-endocrinologist, i-Orsk: "Umenzeli wemithi uvumela ukuthi kutholakale imiphumela emihle ekwelashweni kwesifo sikashukela sesigaba 2. Ngesikhathi sokwelashwa, kubalulekile ukubheka isimo sesiguli, ngoba ezimweni eziningi ukulungiswa kwamthamo kufanele kwenziwe ngemuva kwesonto lokwelashwa. "Uma lokhu kwenzeka, isiguli sizokwazi ukusiza nge-hemodialysis."
U-Elvira, oneminyaka engama-34, uLipetsk: "Kwavela ukuthi kufanele ngiphathe isifo sikashukela. Lesi sifo asisihle, sibangela ukungaphatheki kahle okuningi. Ukwelashwa kuhambisane nalesi sidakamizwa. Angibonanga imiphumela emibi, kepha ukuthuthuka okukhulu akubanga isikhathi eside ukuza. Ngingawubheka njengengcono kakhulu. Ngakho-ke, ngiyawuncoma ezigulini ezinesifo sikashukela. Umuthi ungasiza esikhathini esifushane futhi udambise nezimpawu ezishiwo zesifo. "
U-Igor, oneminyaka engama-23, u-Anapa: "Yize ngisemncane, bekumele ngiphathe isifo esibucayi njengesifo sikashukela. Ngifuna ukuqaphela ngaso leso sikhathi ukuthi ukwelashwa bekungagcini ngokuphuza umuthi. Bekumele ngishintshe indlela engiphila ngayo, ngilungise indlela engidla ngayo futhi ngihlanganise nemidlalo kanye nenqubo yami yansuku zonke. Ukuzivocavoca umzimba.Isidakamizwa sisize ukwehlisa izimpawu ze-pathology, ezaziphazamisa impilo ejwayelekile. Angizange ngiqaphele noma yimiphi imiphumela emibi, ngangizizwa ngijwayelekile ngaphandle kwezimpawu ezijwayelekile zesifo. Ngingawuncoma lo muthi ukuze ngilinganise izinga le-glu eskers. "